जनसन 10 HP Seahorse धुन-अप परियोजना | जहाज को बाहिर नाउ मोटर मर्मत
जनसन 10 HP Seahorse धुन-अप परियोजना
तपाईं आफ्नो Facebook खातामा अब लग गर्न सक्नुहुन्छ।
बुझाउने मत्ती गुरु मा, 06 / 06 / 2019 - 20: 05
बिंदु अंतर र फ्लाईवाइल सेटिङको लागि म्यागनेटो प्लेट चिन्हहरू
पुरानो आउटबोर्डमा रखरखावको लागि निर्देशन प्रक्रिया सिर्जना गर्न समय लिनुभएकोमा धन्यवाद। मैले बिन्दुहरू स्थापना गर्नका लागि तपाइँको विधि पछ्याए पछि 1958 जॉनसन 10hp मा पोइन्टहरू, कुन्डल र कन्डेनसेन्सहरू प्रतिस्थापन गर्दैछु। यदि म माथिको क्यामेरामा शीर्ष अंकमा क्यामेरा राख्छ .20 र त्यसपछि फ्लाईवाहेललाई कुञ्जी थिच्नुहोस्, कुञ्जीसँग सङ्कलन गरिएको, फ्लाईवाहेलमा चिन्ह जुन म बिन्दुहरू सेट गर्न प्रयोग गर्नुपर्नेछ जहाँ चुम्बकटो प्लेटमा दुई अंकको नजिक छैन। मैले चुम्बनो प्लेटलाई (प्लग तारहरू प्रतिस्थापित गर्यो) र पुनःस्थापना गरें, के प्लेट एक विशेष प्रक्रिया पछि पछ्याउन पछाडि खराब हुन्छ? वा एक विशेष चिन्ह संग जोड्नु हुन्छ?
बुझाउने ttravis गुरु मा, 06 / 06 / 2019 - 23: 02
जवाफ बिंदु अंतर र फ्लाईवाइल सेटिङको लागि म्यागनेटो प्लेट चिन्हहरू by मत्ती
म्याग्नेटो प्लेट चिन्ह ......
मलाई चुम्बनो प्लेट राख्ने एक मात्र तरिका हो। त्यहाँ कुनै समायोजन छैन।
मैले इग्निशन प्रणालीको लागि गरेको दुई लिखितअपहरू छन्। मैले एउटा लागि गरे 3.0 इनिनूड र अर्को लागि 5.5 जॉनसन। मैले तिनीहरूलाई विभिन्न समयमा लेखे, र तिनीहरू एकअर्कालाई पूरै राख्दथे, त्यसैले म तपाईलाई उनीहरूलाई पढ्न सुझाव दिन्छु। यी र तपाईंको मोटर्स सबैसँग उस्तै इग्निशन प्रणाली छ। मलाई लाग्छ कि 5.5 ले तपाईंको बिन्दुको व्याख्याको राम्रो काम गर्छ। त्यहाँ मैले यो व्याख्या गर्दछु कि तपाइँ बिन्दुहरू बीचको बीचमा यो केन्द्र बनाउन बिर्सर बिन्दु अंतर समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँसँग 2nd सिलेंडरको लागि तपाईंको फ्लाईवाहेलमा मार्किङ छैन भने, तपाइँसँग सटीक विपरीत साइड वा 180 डिग्रीमा तेर्सो बनाउनु पर्छ। स्ट्याटर आधारमा मात्र एक चिन्ह छ।
मलाई आशा छ कि म तिमीलाई भ्रममा छैन। यदि तपाईलाई अझै सहयोग चाहिन्छ भने, म तपाईंलाई भन्दा राम्रो विशेषज्ञहरु लाई इंगित गर्न सक्छु।
बुझाउने मत्ती मा शुक्र, 06 / 07 / 2019 - 19: 34
जवाफको लागि धन्यवाद। म ...
जवाफको लागि धन्यवाद। म संकलित थाली को लागि एक मात्र स्थान थियो कि संदेह थियो, सिंहासन को लिङ्क को कारण। दुवै उदाहरणहरु (3.0 र 5.5) मा, तपाईं "जब फ्लायवाइल मा समय चिन्ह आर्मेन्ट प्लेट मा दुई अंकहरु बीच छ, बिन्दुहरु खुला हुनुपर्छ र ओएनएम मीटर0बाट परिवर्तन हुनेछ ohms।" जब टाइम मार्क यो स्थितिमा छ, मीटरले शून्य पढ्छ। यदि म फ्लाईवाहेल (सावधानीपूर्वक) टाँस्न भने, क्यामेरामा बिन्दुहरूको जूता उच्च बिन्दु नजिकै छैन, "माथि" चिन्ह लगाइयो। यदि म आर्मुलेट प्लेट सार्न पूर्ण थ्रोटलले फर्काउँछ भने, म यसलाई नजिक पुग्न सक्दछ, तर माथि होइन।
मलाई लाग््छ कि म यस प्रक्रिया मा एक धेरै आधारभूत त्रुटि बना रहयो हूँ, जस्तो लाग््छ कि यो सीधी अगाडी हुनु पर्छ।
बुझाउने ttravis मा शनि, 06 / 08 / 2019 - 11: 10
जवाफ जवाफको लागि धन्यवाद। म ... by मत्ती
तपाईंसँग निश्चित हुनुहुन्छ ...
के तपाईसँग निश्चित छ कि तपाइँसँग मोटरको लागि सही अंकहरू छन्? सोच्दै थिए।